Stephen's 'Lot Salem' ga -emenye ihe nkiri egwu na 2022 - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Stephen King 'Lot Salem' ga -emenye ihe nkiri egwu na 2022
Stephen King 'Lot Salem' ga -emenye ihe nkiri egwu na 2022
Vampire wakporo ụlọ ihe nkiri na 2022
by Trey Hilburn III September 12, 2021 3,394 echiche
Gary Dauberman duziri ma dee ya Lot nke Salem mmegharị ahụ adịghị anya. Akụkọ Stephen King nke obodo aa na -enwe vampires bụ akụkọ mgbe niile site n'aka onye edemede. Emere mmegharị ya bụ isi maka obere ihe nkiri onyonyo. Yabụ, nrụzigharị a bụ nke a nabatara nke ọma. Ọ dabara nke ọma dị ka Cinema New Line anyị agaghị eche ogologo oge ka onye a kụọ ihe nkiri. Ọ ga -eru n'otu afọ site ugbu a, Septemba 2022.
Mears dị n'etiti Lot nke Salem. Ọ bụ onye na -alaghachi n'obodo ya ịchọpụta obodo dị iche n'ezie. A na -atụgharị onye ọ bụla ka ọ bụrụ vampires site na ihe okike ochie nke na -eripịa ndị bi n'obodo ka ha na -ehi ụra.
Akụkọ vampire Stephen King bụ ihe na-eme oge niile, mana nke enyochabeghị nke ọma na fim anyị nwere ugbu a. Ka emechara, ihe nkiri anyị nwere ugbu a bụ obere ihe onyonyo. A ghaghị ebipụ ọtụtụ nke ukwuu gorrier ibe. N'ezie, ọtụtụ akwụkwọ adịghị ebe ahụ.
Gary Dauberman na -eduzi nrụgharị ahụ, ọ na -enwekwa obi anụrị ịnagide ihe nkiri ahụ na ime ka ọ bụrụ eziokwu na ndụ dịka akwụkwọ enwere ike.
Ị nwere obi ụtọ maka nrụgharị maka Stephen King Lot nke Salem? Mee ka anyi mara na ngalaba a.